Sida ugu fudud ee wajiga qofka loogu badalo Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadeynta ayaa ah kheyraad xaadir ah ku dhowaad dhammaan hay'adaha maanta. Xitaa waxaan dhihi karnaa aaggan aqoonta ah waxay unoqdeen cunsur muhiim u ah ganacsiga waxsoosaarka ay soo saaraan shirkadaha.
Iyo haa, walxaha muuqda waa kuwo aad muhiim u ah maalmahan markay tahay suuqgeynta iyo iibinta, sidaa darteed, shirkadaha intiisa badan waxay isku dayaan inay leeyihiin dhammaan waxyaalaha muuqaalka ah ee ay doorbidayaan, iyagoo ka dhigaya naqshadeynta garaafka shaqo xirfad shaqo oo ballaaran.
Marka, shaqada nashqadeynta waxay ku guuleysatay inay daboosho goobo badan, oo noqotay mid ka mid ah shaqooyinka xilligan la joogo.
Tan waxaan sidoo kale ku dari karnaa asalka farshaxanka in aan ka heli karno naqshadeynta, taas oo ah sababta ay suurtagal u tahay in la helo tiro badan oo farshaxanno ka shaqeynaya naqshadeynta garaafka, sameynta naqshadeynta ah ganacsi iyo shaqo farshaxanba. Waa mid ka mid ah edbinta ugu raaxada badan ee jira, si kastaba ha noqotee, ma jirto sabab loo dhayalsado, maxaa yeelay sida xirfad kasta, qaabeynta waxaan ka heli karnaa dhammaan noocyada kala duwan caqabadaha iyo dhibaatooyinka ku badan kakanaanta.
Maanta waxaan keenaynaa mid ka mid ah farsamooyinka loogu doondoonista badan yahay aagga naqshadeynta, beddelka wajiyada waxaanna si kooban u soo bandhigi doonnaa tallaabooyinka la raacayo inaad awood u yeelatid inaad ku fuliso isbeddelka wejiga hal sawir illaa sawir kale.
Casharro lagu beddelayo wejiga qofka
Waxaan fureynaa labada sawir ee aan ku shaqeyn doonno.
Waxaan u bedeleynaa sawirada midabka midab madow iyo cadaan. Haddii aadan aqoon sida loo sameeyo tan, waxaan aadeynaa Menu - Edition - Mode iyo waxaan bedeleynaa qaabka RGB by grayscale
Waxaan doorannaa qalabka 'lasso' oo waxaan doorannaa wejiga.
Xulashada (oo loo maleynayo inay tahay wejiga aan dooneyno inaan dhigno) ayaan u jiideynaa sawirka kale.
Samee a xulashada wajiga aan daboolayno oo ku dhaji lakab kale. Midig Guji - Lakabka nuqul ahaan.
Waxaan u dhigmaynaa midabka labada weji
Waxaan dooraneynaa lakabka 1: Menu Sawirka - Isku hagaajinta - midabka ciyaarta.
In guddi ciyaarta midabka dooro sawirka isha iyo lakabka lakabka 2 oo saxeex OK.
Waxaan horeyba u leenahay labo xitaa waji, marka xiga, waan awoodnaa ka saar lakabka 2 ama qari.
Waxaan dhigeynaa lakabka 1 dusha sare ee wajiga asalka, iyadoo loo baahan yahay inaan hoos u dhigno mugdiga oo aan u dhaqaaqno illaa inta wajiga uu ka saxmayo.
Ku abuur maaskaro lakabka 1, xulashada burushka jilicsan iyo rinjiyeynta maaskaro illaa aan ka dhexgalno wejiga oo dhan.
Iyo voila, waxaan waji cusub ku yeelan doonnaa muuqaalkeena. Tallaabooyinka waxay noqon karaan qaar daallan, sidaas darteed howshu waxay ubaahantahay dulqaad dhankeenaSi kastaba ha noqotee, waxba maahan in wax laga qoro guriga, sidaa darteed dadka isticmaala waxay ku dhex mari karaan dib u eegis ku saabsan oo ay wax badan iyo inbadan ka baran karaan habka wejiyada loo beddelayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Sida si fudud loogu beddelo wajiga qofka Photoshop